Notch ပါတဲ့ Xiaomi Mi A2 Lite ထွက်လာမလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Notch ပါတဲ့ Xiaomi Mi A2 Lite ထွက်လာမလား ?
Notch ပါတဲ့ Xiaomi Mi A2 Lite ထွက်လာမလား ?
Xiaomi က အိန္ဒိယမှာ Mi A2 ကို Mi 6X အမည်ဖြင့် ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ Mi A1 ကိုလည်း Mi 5X အမည်ဖြင့် ရောင်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ Mi A1 ဟာ ရှောင်မီရဲ့ ပထမဆုံး Android One Smartphone ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Mi A2 Lite ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ သူ့ကို စင်ကာပူ Certification Site တစ်ခုမှာ စာရင်းတင်ထားပြီး စင်ကာပူမှာ ရောင်းချဖို့ သေချာနေပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအရ Mi A2 Lite မှာ Display Notch ထည့်သွင်းထားပြီး အနောက်ဘက်မှာ ကင်မရာနှစ်လုံးကို ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေရာ အာရုံခံ ကိရိယာလည်း ပါပါတယ်။ သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Mi A2 Lite မှာ Android 8.1 Oreo ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Android One Smartphone ဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သူ့မှာ ၅.၈၄ လက်မ Full HD+ Display ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 2GHz Octa-Core Processor ထည့်သွင်းထားပြီး RAM အတွက်တော့ 2GB , 3GB , 4GB များ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Storage အပိုင်းမှာလည်း 16GB, 32GB , 64GB များ ထည့်သွင်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ တစ်လုံးကတော့ 12MP ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်လုံးကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အရှေ့ဘက်မှာ 5MP Camera တစ်လုံး ပါပါတယ်။ ဘက်ထရီမှာ 3900mAh ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချမယ့် အချိန်ကို မသိရသေးပေမယ့် မကြာခင်မှာ ရောင်းချတော့မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
Notch ပါတဲ့ Xiaomi Mi A2 Lite ထှကျလာမလား ?
Xiaomi က အိန်ဒိယမှာ Mi A2 ကို Mi 6X အမညျဖွငျ့ ရောငျးခပြေးလိုကျပါတယျ။ Mi A1 ကိုလညျး Mi 5X အမညျဖွငျ့ ရောငျးပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ Mi A1 ဟာ ရှောငျမီရဲ့ ပထမဆုံး Android One Smartphone ဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ Mi A2 Lite ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြား ထှကျပျေါလာပါတယျ။ သူ့ကို စငျကာပူ Certification Site တဈခုမှာ စာရငျးတငျထားပွီး စငျကာပူမှာ ရောငျးခဖြို့ သခြောနပေါတယျ။
မှတျပုံတငျထားတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ Mi A2 Lite မှာ Display Notch ထညျ့သှငျးထားပွီး အနောကျဘကျမှာ ကငျမရာနှဈလုံးကို ဒေါငျလိုကျ တပျဆငျထားပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ လကျဗှရော အာရုံခံ ကိရိယာလညျး ပါပါတယျ။ သတ်တုကိုယျထညျဖွငျ့ တညျဆောကျထားပါတယျ။
Mi A2 Lite မှာ Android 8.1 Oreo ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ Android One Smartphone ဖွဈမလားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သူ့မှာ ၅.၈၄ လကျမ Full HD+ Display ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ 2GHz Octa-Core Processor ထညျ့သှငျးထားပွီး RAM အတှကျတော့ 2GB , 3GB , 4GB မြား ရှေးခယျြနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Storage အပိုငျးမှာလညျး 16GB, 32GB , 64GB မြား ထညျ့သှငျးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အနောကျကငျမရာ တဈလုံးကတော့ 12MP ဖွဈပွီး နောကျတဈလုံးကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အရှဘေ့ကျမှာ 5MP Camera တဈလုံး ပါပါတယျ။ ဘကျထရီမှာ 3900mAh ဖွဈပါတယျ။ ဈေးနှုနျးနဲ့ ရောငျးခမြယျ့ အခြိနျကို မသိရသေးပမေယျ့ မကွာခငျမှာ ရောငျးခတြော့မယျလို့ ထငျရပါတယျ။
Previous articleSamsung က Galaxy S10 မှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံး ထည့်သွင်းမလား?
Next articlePop-Up ကင်မရာပါဝင်ဖို့ သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့ VIVO NEX